🥇 Ukwenza ingxelo kunye nokuhlelwa kwezothutho
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 35
Ividiyo ye-accounting kunye nokuhlelwa kwezothutho
Uku-odolwa kwengxelo kunye nolungiselelo lothutho
Inkqubo yolawulo lokuhamba kwemithwalo ye-USU-Soft yinkqubo esombulula imisebenzi emininzi ngexesha elinye. Inceda ukwandisa umsebenzi wombutho ngokwenza izinto ezizezazo zeshishini ngokuzenzekelayo. Isoftware yenza ukubalwa kwemali kunye nokugcina ngokuzenzekelayo, kwaye umsebenzi onamaxwebhu uye ubelula kwaye ukhawuleze. Intshukumo nganye yengcali yenkampani irekhodwa kwinkqubo yobalo lombutho, emva koko yaqokelelwa yahlalutywa ngokunxulumene nezinye izinto. Esi sisiseko sohlalutyo olunzulu lwenkqubo, idatha ebaluleke kakhulu kwizigqibo zolawulo ezichanekileyo. Inkqubo yobalo-mali kwinkampani yethu iqinisekile ukunceda ulawulo lombutho wakho. Ngapha koko, ikunika ukuhamba kolwazi malunga nayo yonke into eyenzekayo kwishishini lakho. Uthutho lwemithwalo luhlobo olukhethekileyo lokuhambisa iinkonzo. Ukubenza babe neendleko ngakumbi kwaye babe nenzuzo, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwinto nganye. Ukuba umbutho uneemephu ezingakhelwanga kakuhle zeendlela, iindlela zothutho zothutho ziya kusetyenziswa ngokungekho mthethweni, kwaye iindleko ziya kunyuka. Xa kungekho lawulo, iilori ngokubanzi zinokungasebenzi okanye zisetyenziselwe ukwenza ingeniso engekho mthethweni kubasebenzi. Ezothutho kufuneka zicwangciswe ngokucacileyo, kwaye inkqubo yolawulo lokunikwa kwengxelo inokunceda koku.
Inkqubo yolawulo lothutho lwempahla ezenzekelayo yenkqubo yocwangciso-mali lithuba lokugcina ubudlelwane obuhle kunye nabathengi, ufunde iimfuno zabo kunye neminqweno. Inkqubo yobalo mali inokuhlalutya iimpahla, iikhontrakthi, kwaye ngekhe ikuvumele ukuba wophule imigaqo yesivumelwano, nokuba kungumgangatho wenkonzo, okanye ngokwexesha. Ukuhanjiswa kwemithwalo nganye kuya kuba nomsebenzi onoxanduva oqinisekisa ukuba umthwalo ngamnye uya kuthunyelwa kwaye ufumaneke kwangexesha. Ukudalwa kweenkqubo zolawulo zothutho ezindleleni kwaqala ekupheleni kwenkulungwane ephelileyo. Kwaye ekuqaleni babeyinkqubo entle yakudala. Ngophuhliso lonxibelelwano lweemoto, ukugcwala kweemarike ngezothutho, iimfuno zenkqubo yobalo-mali yolawulo lombutho nayo itshintshile. Namhlanje, kwishishini lempahla, umntu akanakwenza ngaphandle kwenkqubo enamandla, enemveliso yolawulo lobalo olunokuthi ngokuzeleyo luzise ucwangco kuyo yonke into.
Inkqubo yolawulo ingayinika ntoni umbutho wonke wezothutho ukongeza kulawulo oluzenzekelayo kuthutho ezindleleni kunye nemithwalo? Okokuqala, umgangatho wenkonzo uyakhula, kwaye abathengi bayakuqaphela oku ngokukhawuleza. Ukulungiswa kweendleko zothutho kufikelela kwi-25% sele iinyanga ezintlanu zokuqala zisebenzisa inkqubo ezenzekelayo. Ixesha elithathayo ukuhamba kulungelelwaniso lwezinto luyancitshiswa ngesixa esifanayo. Inkqubo ezenzekelayo yokubalwa kwemali ikuvumela ukuba unciphise i-mileage yezothutho zendlela phantse i-15%, kwaye inkqubo yocwangciso lokuhanjiswa iyancitshiswa ngama-95%. Isoftware iyanceda ekwenzeni ulawulo lusebenze, kuba enyanisweni liza kuphendula imibuzo emininzi edla ngokubuzwa ziingcali kwicandelo lolawulo lwezothutho- kuthatha ixesha elingakanani ukucwangcisa indlela kunye nokulungiselela ukuhanjiswa kwempahla? Ukunciphisa njani iindleko zothutho ezindleleni, ngelixa usonyusa inzuzo yeenkonzo? Yintoni eyinzuzo ngakumbi - ukusebenzisa izixhobo zakho zezithuthi okanye ukusebenzisa iinkonzo zothutho zeqabane lakho? Ngaba yonke inethiwekhi iyasebenza, kwaye umdlalo ufanele ixabiso lekhandlela?
Umsebenzi wokuzenzekelayo awukho malunga nokusetyenziswa kwespredishithi se-Excel njengoko abanye abantu becinga. Ukuzenzekelayo okwenyani kwenziwa ngokusetyenziswa kwenkqubo ehambele phambili. Kwaye kufuneka ikhawuleze, ichaneke, ingaphazanyiswa, isebenze, ithembeke, iqinisekise isantya esiphezulu sokubala. Inkqubo yokuyisebenzisa ayifanelanga ukuba ibe nzima; sikhetha ujongano olulula olungafakwanga ziziphazamiso ezingeyomfuneko. Enye yeenkqubo ezilungileyo zokulawulwa kwempahla ngu-USU-Soft. Yenziwe ngabaphuhlisi abanamava abazame ukuthathela ingqalelo ubuninzi beemfuno kunye neempawu zezi ntlobo zothutho, kwaye ke inkqubo yokubalwa kwemali ilungile ekubekeni iliso nasekusebenziseni iinkqubo zothutho xa zisebenza ngemithwalo kunye nokuthuthwa kwendlela. Inkqubo ye-USU-Soft ezenzekelayo iququzelela ukucwangciswa kwendlela, kuthathelwa ingqalelo zonke izinto - ukusuka kwixesha elinikezelweyo ukuya kuhlobo lomthwalo. Kuya kukunceda ufumane iingxelo nanini na. Ulawulo oluzenzekelayo kunye nolawulo lwemali, indawo yokugcina izinto ezenzekelayo, kunye nokuhamba kwamaxwebhu- ezi ziyinxalenye nje yezityebi kunye nokusebenza okubanzi kwenkqubo ye-USU-Soft yenkqubo yobalo. Inkqubo yokuqhuba uthutho ikhawuleza, kuba ukuhamba kwesithuthi ngasinye kulula ukulandela umkhondo.
Inkqubo yolawulo oluzenzekelayo inciphisa umthwalo kubasebenzi ngokunciphisa inani lezinto ezinyanzelekileyo ezenziwayo. Nawuphi na umsebenzi ekucwangcisweni kwenkonzo ukuya ekuphunyezweni kwayo uya kukhawuleza. Inkqubo inceda ekuphuculeni ulawulo lweenkqubo zothutho. Akusayi kuphinda kuthathe ixesha elininzi ukuba inkampani ibe yinkokeli kwicandelo layo, kwaye ngokomgangatho wokuhanjiswa kwempahla, uqinisekile ukuba awunakuthelekiswa nanto. Kwangelo xesha, inkqubo yolawulo ayiyi konakalisa uhlahlo-lwabiwo mali lwenkampani. Akukho sidingo sokuhlawula umrhumo wobhaliso, kuba indleko zelayisensi zanele.
Isoftware ivelisa iinkcukacha zolwazi ezichanekileyo nezichanekileyo zabathengi ngenkcazo yesivumelwano ngasinye kunye nomthwalo ngamnye othunyelwe ngaphambili. Oku kuququzelela ukusebenzisana okwenziwe ngumntu kunye nomthengi ngamnye. Inkqubo yobalo-mali yombutho inceda ekuphuculeni izinto ezithengwa yinkampani kwiimfuno zayo. Izakubonisa iindleko, iimfuno, ezona meko zibalaseleyo zabanikezeli ukunika inkampani yemoto ithuba lokunciphisa iindleko. Ulawulo kwindawo yokugcina izinto luya kunceda ukwenza ukuhanjiswa kunye nokothula ngexesha kwaye kuthathelwe ingqalelo ukuhamba kwesahlulo ngasinye, ipetroli. Ukusetyenziswa kweselfowuni kwezixhobo ze-elektroniki, ezinokuthi ngokuzithandela zongeze inkqubo yekhompyuter, kuya kunceda kwimicimbi yokulawula kude, kunye nokwenza unxibelelwano phakathi kwabasebenzi beenkampani kunye nabathengi beenkonzo zemithwalo zilula. Unokufunda okungakumbi malunga nokuhluka kweshishini leemoto, iindlela zokwenza ngcono ukuhanjiswa kwempahla kwiBhayibhile yenkokeli yanamhlanje. Uhlelo lwayo oluhlaziyiweyo luya kunceda umlawuli ukuba akhokele ishishini kwimpumelelo.